politika fiarovana fiainan'olona – Europe Dating Online
Politika fiarovana fiainan'olona (politika fiarovana fiainan'olona) ho an'ny stonesaudio.nl
Ny fiantohana ny fiainana manokan'ny mpitsidika stonesaudio.nl dia asa lehibe ho anay. Izany no antony hamaritanay ao amin'ny politikan'ny fiainana manokana ny fampahalalana voaangonay sy ny fomba ampiasanay an'io fampahalalana io.
Amin'ny fampiasana ny fampahalalana sy serivisy amin'ny stonesaudio.nl, ekenao ve ny politikanay manokana sy ny fepetra nampidirinay ato.
Raha te hahazo fanazavana fanampiny ianao, na manana fanontaniana momba ny politikan'ny fiainana manokana an'ny stonesaudio.nl ary indrindra ny stonesaudio.nl, afaka mifandray aminay amin'ny info@stonesaudio.nl ianao
4) Fanaraha-maso ny fihetsiky ny mpitsidika
Manara-maso ihany koa izahay hoe aiza no hitsidihan'ny mpitsidika voalohany ny tranokala ary avy amin'ny pejy aiza izy ireo. Tsy mitonona anarana izahay ary tsy mifandray amin'ny mombamomba manokana hafa, fampahalalana navoaka tamin'ny tranokala.
5) Fampiasana cookies
stonesaudio.nl dia mametraka cookies amin'ny mpitsidika. Manao izany izahay mba hanangonana vaovao momba ireo pejy tsidihin'ny mpampiasa amin'ny tranokalanay, mba hanaraha-maso hoe impiry ny mpitsidika no miverina ary mijery izay pejy mandeha tsara ao amin'ny tranokala. Manara-maso ny vaovao zarain'ny navigateur ihany koa izahay.
6) Atsaharo ny cookies
Azonao atao ny misafidy ny hanafoana ny cookies. Manao izany ianao amin'ny fampiasana ny safidy amin'ny navigateur. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ireo safidy ireo ianao ao amin'ny tranokalan'ny mpanome navigateur anao.
7) Cookies avy amin'ny antoko fahatelo
Mety ho ny antoko fahatelo, toy ny google, manao dokam-barotra amin'ny tranokalanay na mampiasa serivisy hafa izahay. Amin'ny toe-javatra sasany, ireo antoko fahatelo ireo dia mametraka cookies ho an'izany. Ireo cookies ireo dia tsy azon'ny stonesaudio.nl voataona.
8) Ny mpanao dokam-barotray
Antoko maromaro no manao dokambarotra ao amin'ny stonesaudio.nl, izay samy mametraka ny mofomamy.
Ireo mpanao dokam-barotra ireo dia mampiasa teknolojia ho an'ny dokany sy ny rohy ao amin'ny dokany izay fantatry ny navigateur avy hatrany. Ankoatra ny zavatra hafa, mampiasa ny fanekena mandeha ho azy ny adiresy IP alefa mivantana amin'ny mpanao dokambarotra izy ireo.
Het gebruik van een DART-cookie door Google, mamela ny dokam-barotra aseho amin'ny tranokalanay. Ankoatra izany, ity cookie ity dia ampiasaina hanehoana dokam-barotra amin'ny tranokala hafa. Afaka misafidy ny tsy hampiasa ny Cookie DART intsony ianao. Azonao atao izany amin'ny fitsidihana ity tranonkala manaraka ity: amin'izato lokony